Manchester City oo la sheegayo in ay ku guuleysatay heshiis ay xagaagan kula soo wareegi doonto Harry Kane – Gool FM
(Manchester) 25 Feb 2019. Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda Manchester City ay ku guuleysatay heshiis ay kula soo wareegi doonto xagaagan weeraryahanka kooxda Tottenham iyo xuka Ingiriiska Harry Kane.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa waxa ay Manchester City ku qaadan doontaa 86 milyan oo giniga istarliinka ah (100 milyan oo Euro) iyo ciyaaryahan Gabriel Jesus oo heshiiskan qayb ka ah isla markaana aadi doona dhanka Tottenham.
Sida uu ku warramayo warsidaha ‘Diario Gol’ Kane oo lala xiriirinayay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Real Madrid, Barcelona iyo Manchester United ayaa waxa uu ku qiimeysan yahay 200 milyan oo Euro, waxaana City ay ku iibsan doontaa 86 milyan oo gini (100 milyan oo Euro) iyo Jesus oo isna jooga 100 milyan oo Euro.
Kane oo dhowaan ka soo bogsooday dhaawac uu ku maqnaa ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda xagga sare kaga jira kala sarreynta gool dhalinta Premier League isagoo dhaliyay 15 gool, halka Mohamed Salah (Liverpool) iyo Sergio Aguero (Man City) oo ka horreeyana ay leeyihiin 17 gool.
Talaabada ay Chelsea ka qaadi doonto Goolhaye Kepa oo la ogaaday kaddib markii uu ka dhaartay inuu garoonka ka soo boxo ciyaartii Xalay...!!!!